TIKO Andranomanelatra : Notapahan’ny JIRAMA…20 miliara ny trosa -
AccueilRaharaham-pirenenaTIKO Andranomanelatra : Notapahan’ny JIRAMA…20 miliara ny trosa
Voatery nandray fanapahan-kevitra nanapaka ny jiro sy rano tao amin’ny TIKO Andranomanelatra ny orinasa JIRAMA noho ny trosa mihavosa tahaka ny fakon’Antananarivo, mahatratra hatrany amin’ny 20 miliara. Fisehoana ivelany fotsiny ihany daholo ny filanjana Baiboly ataon’i Marc Ravalomanana mivady fa fambotriana firenena sy famitaham-bahoaka no ao ambadika. Manaprofo izao fa tsy volan’ny TIKO velively no ampiasain’izy mivady sy ny antoko TIM amin’ny fitetezam-paritra manao propagandy mialohan’ny fotoana fa ny hetra aloan’ny vahoaka ao amin’ny CUA.
Trosam-bahoaka mandehandeha, izay no azo ilazana ny orinasa TIKO. Saron’ny ministeran’ny Indostria indray koa mantsy ny teti-dratsin’i Marc Ravalomanana ka nahatonga ny fanakatonana tanteraka ny orinasa AAA ny faha-5 oktobra 2017. Nanao fifanarahana mifono tamin’ny vondrona TIKO ity orinasa AAA ity mba ahafahan’ity farany mampiasa ny ozinina TIKO ao Andranomanelatra mamokatra ireny Olympiko, dibera ary yaourt ireny. Ny tanjona tamin’izany paikady teo amin’ny orinasa TIKO sy ny orinasa AAA izany dia ny hialan’ny vondrona TIKO amin’ny fandovana ireo trosana hetra mitentina hatrany amin’ny 600 miliara efa tany amin’ny 15 taona lasa.
Mazava ho azy fa tsy maintsy ho tonga hatramin’ny figiazana ireo fananan’ny orinasa TIKO izao trosa be mihavosa tokony haloany amin’ny kitapom-bolam-panjakana izao. Mibaribary eo imasom-bahoaka tanteraka ankehitriny ny tena endrik’izany antsoina hoe Marc Ravalomanana izany. Milaza ho tia tanindrazana kanefa mitsentsitra ny vahoaka sy ny firenena. Mendri-piderana araka izany ny JIRAMA sahy nandray andraikitra nanapaka ny jiro sy rano tao amin’ny orinasa TIKO noho ireo trosa mitentina 20 miliara ireo. Toraka izany koa ny ministeran’ny Indostria izay nahatratra ny paikady maloto nandosiran’ny vondrona TIKO ny fandoavana ireo trosa-na hetra mitentina 600 miliara. Tsy iza moa no tompon’ilay orinasa AAA voalaza etsy ambony fa ny tale jeneralin’ny vondrona TIKO teo aloha ihany, Razafimahefa Heriniaina.